पोखरामा किन ल्यान्ड हुन सकेन ‘लिलिबिली’ टिम ? « Ramailo छ
पोखरामा किन ल्यान्ड हुन सकेन ‘लिलिबिली’ टिम ?
समय : 10:53 am
आइतबार दिउँसो प्रेसमिट सकेर ‘लिलिबिली’ टिम हतार हतार निस्किएको थियो । पोखरामा कार्यक्रम छ भन्दै निर्देशक मिलन चाम्स, नायक प्रदीप खड्का, नायिका जसिता गुरुगं, गायक प्रताप दास र निर्माता सुदीप खड्का कार्यक्रमबाट सिधै त्रिभुवन विमानस्थलतिर लागेका थिए ।
उनीहरु साँझको कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी पोखरातिर उडे । तर पोखरा ल्यान्ड भने गर्न सकेनन् । प्लेन आकाशमा करिब डेढ घण्टाजति उडेको तर पोखरा ल्यान्ड हुन नसकेको निर्देशक चाम्सले बताए । पोखरा ल्यान्ड हुन नसकेपछि प्लेन पुनः काठमाण्डौं फर्किएर ल्यान्ड गरेको थियो । प्लेन पोखरा नगएपछि ‘लिलिबिली’ टिम प्रचार गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेन । प्रदीपसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
आफ्नो टिम कार्यक्रममा सहभागी हुन असमर्थ भएपछि नायक खड्काले क्षमा माग्दै पोखरा आउँदैछु भनी पोस्ट गरिएको स्टाटस करेक्सन गरे । खराब मौसमका कारण टिम पोखरा जान नसेकपटि लिलिबिली टिम अहिले चितवन जाँदैछ । चैत ३० गते प्रदर्शनमा आउने फिल्मको टिम प्रचार प्रसारमा लागि रहेको छ ।